ဆန်ခါတင်ဝန်ဆောင်မှု - အရာရှိ, ဒါရိုက်တာနှင့်မန်နေဂျာများ
ဆန်ခါတင်ဝန်ဆောင်မှုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများထဲကသူတို့ရဲ့အမည်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကော်ပိုရေးရှင်းရှယ်ယာရှင်များနှင့် LLC အဖွဲ့ဝင်များကအသုံးပြုမယ့် privacy ကို technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကဆက်ပြောပါတယ်အခကြေးငွေရှေ့နေတစ်ဦးအမှုယူမီမပထမဦးဆုံးအရာတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုရှာဖွေရေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရှေ့နေပိုင်ဆိုင်မှုကိုမတှေ့နိုငျလျှင်, ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီကိစ္စတွင်ယူလျော့နည်းဖွယ်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်အများပြည်သူမှတ်တမ်းများထဲကသင်တို့၏နာမစောင့်သောအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏မျက်နှာသာအတွက်အလေးသာထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်တရားစွဲမှု, အပါအ, ဘဏ်အကောင့်လေဝိ, အိမ်ခြံမြေဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်စျေးကြီးဥပဒေရေးရာအခကြေးငွေများအခွင့်အလမ်းကိုလျှော့ချကိုကူညီပေးပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှု privacy ကောင်းတစ်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်အတွက်ပထမဦးဆုံးအလွှာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကော်ပိုရိတ် formal, ဥပဒေရေးရာ Shield ကိုဝန်ဆောင်မှု
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဆန်ခါတင်ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေရေးရာသဘောတူစာချုပ်ချုပ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဆန်ခါတင်, သင့်တောင်းဆိုမှုကိုမှာနှစ်စဉ်ရှယ်ယာရှင်ဒါရိုက်တာအစည်းအဝေးများကျင်းပရန်သင့်အားလှုံ့ဆျောနိုငျသညျ။ ဒါ့အပြင်သူသို့မဟုတ်သူမသင်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏တရားဝင်လိုအပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုရေးဆွဲကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားကော်ပိုရေးရှင်းအခမ်းအနားမဟုခေါ်ကြသည်။ တရားရုံးအမှုတွဲများတွင်တရားသူကြီးတစ်ဦးကိုပုံမှန်အားဖြင့်သင်တို့ကိုသီးခြားအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ကော်ပိုရေးရှင်းကုသလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ အရေးအပါဆုံးအချက်တစ်ခုမှာသင်လိုအပ်ကော်ပိုရိတ်အခမ်းအနားမစတငျခဲ့နှင့်သင့်အရေးကြီးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရပ်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
Plus အားသင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသူတွေနဲ့အတူကော်ပိုရိတ်ရန်ပုံငွေ comingle မသခြောရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်လိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်သင့်ရဲ့ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်အကောင့်နှင့်အတူသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလျှပ်စစ်ဥပဒေကြမ်းပေးဆောင်မနေပါနဲ့။ ထိုမှတပါး, သင်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ဆန်ခါတင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကုမ္ပဏီ၏နာမ၌စာချုပ်များလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း, မည်မဟုတ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Pat Smith က ABC ရုပ်သံ Inc ၏သမ်မတ, မရိုးရှင်းစွာ Pat လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။ Smith က။ သင့်ရဲ့ဆန်ခါတင်ကြောင့်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှင့်လိုအပ်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဖို့လိုက်နာစောင့်ထိန်းနိုင်အောင်သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါလို့ခေါ်တဲ့ကော်ပိုရိတ်အခမ်းအနားမန်ဆောင်မှု, ဥပဒေရေးရာ Shield ကိုဝန်ဆောင်မှု TM တစ်ခုနှင့်အပိုဆောင်းကြေးများအတွက်တစ်ဦးကဆက်ပြောသည်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်အထဲကရှာတွေ့မှ link တစ်ခုဖြစ်ပါသည် စြေး ဤအတန်ဖိုးရှိသောဝန်ဆောင်မှုသည်။
သင်မည်သို့ Protected နေကြသနည်း
တစ်ဦးအဖြစ်လျာထားသောငါ့အငွေနှင့်ပယ် run နိုင်ပါသလား? အဘယ်သူမျှမတစ်ဦးအဖြစ်လျာထားသောရိုးရှင်းစွာကိုယ်ငွေနှင့်၏ run, ဒီမှာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့မရပါဘူး။ ပထမဦးစွာဆန်ခါတင်သင့်ရဲ့ဦးတည်ချက်အရသိရသည်ပြုမူသောအတင်းကျပ်သဘောတူထားသောသဘောတူညီချက်လည်းမရှိ။ ဒုတိယ, ဆန်ခါတင်သင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ပေါ်မှာလက်မှတ်မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ဆန်ခါတင်သင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါ။ တတိယအချက်သဘောတူညီချက်သင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ပေးလျှင်ဆန်ခါတင်ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှုမရောင်းနိုင်သောကဤသို့ဆို၏။
ဆန်ခါတင် "သာနာမ၌။ " ကိုဆိုလိုသည်ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, ဆန်ခါတင်ရိုးရှင်းစွာအများပြည်သူမှတ်တမ်းများအတွက်နာမည်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့်သင့်ကုမ္ပဏီကိုကျော်ထိန်းချုပ်မှုမရှိပါ။ သငျသညျ, ထိုရှယ်ယာရှင်အဖြစ်, အဆုံးစွန်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ သင်ကမဲပေးခွင့်ရှိသည်။
ငါဆန်ခါတင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမကြိုက်ဘူးလျှင်အဘယ်သို့နည်း, ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များရှိခဲ့ကြသိသောတစ်ဦးအမှန်တကယ်ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးသော်လည်း, ကမေးခွန်းဖြေကြားကျိုးနပ်သည်။ အဖြေရိုးရှင်းပါသည်။ သင်ဆန်ခါတင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ထွက်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်အချိန်မရွေးအတွက်အထဲကဆန်ခါတင်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်မဲပေးနိုငျသညျ။ တနည်းကား, သငျသညျ, အများစုကော်ပိုရေးရှင်းရှယ်ယာရှင်သို့မဟုတ် LLC အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်, အဆုံးစွန်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။
သင်က CEO ဖြစ်သူဖြစ်ကြသည်။ အများဆုံးပြည်နယ်များအတွက်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (CEO ဖြစ်သူ) အများပြည်သူဆိုင်ရာစံချိန်တစ်ခုကိစ္စမျှမက, ကော်ပိုရိတ်ဒုတိယသမ္မတနှင့်အတူတူညီ။ ဒါကြောင့်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်ကိုယ်အဘို့ဤအရာထူးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, အခွင့်အရေးကိုမဲပေးနှင့် CEO ဖြစ်သူအနေအထားကိုင်ထားမှတဆင့်, သင်ထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အဆန်ခါတင်ဟာလူသိရှင်ကြားစာရင်းရာထူးကိုင်ပြီးအတူသင်ရေဒါအောက်မှာပျံသန်း။
အခြိနျမှနျမှလူတွေက "ဒီဥပဒေရေးရာ Is?" ကျွန်တော်တို့ကိုမမေးဒီသိသာထင်ရှားစွာပင်ဥပဒေရေးရာမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်ကတည်းကကဥပဒေရေးရာအဖြေကိုထိုက်တန်ပါတယ်။ ပညတ္တိကျမ်းသူ့ဟာသူထက်ကိုကြည့်ရှုရန်မပိုကောင်းရာအရပျရှိပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတလွှားအများအပြားပြည်နယ်များအတွင်းရှိကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာဥပဒေများအလားတူပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိသည်။ အားလုံး 50 ပြည်နယ်များအတွက်အမေရိကန်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် LLC ပညတ်တရား၏အတော်များများကကဏ္ဍများမျှသာကာဗွန်မိတ္တူသို့မဟုတ်အချင်းချင်း paraphrased ဗားရှင်းဖြစ်ကြသည်။
စိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါအရာရှိတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးရှယ်ယာရှင်များထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ အရာရှိများနှင့်ဒါရိုက်တာများကုမ္ပဏီအတွင်းရာထူးဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကရှယ်ယာရှင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲ့တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်အဖြစ်မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုပါစေ။ သငျသညျသင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ဆိုင်ပြောကြပါတယ်။ သငျသညျကားပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျယာဉ်အတွက်ပေးပို့စေကာဝန်ထမ်းကိုသွန်သင်နိုင်မည်အကြောင်း။ သငျသညျကားပိုင်ဆိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဥပမာထဲမှာသင်ကရှယ်ယာရှင်ဖို့အကြမ်းဖျင်းညီမျှကြသည်။ သူသို့မဟုတ်သူမကားကို operating ကြောင့်သင့်ရဲ့ဝန်ထမ်းအရာရှိတစ်ဦးသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှအလားတူပါပဲ။
ဒါကြောင့်ဒီကော်ပိုရေးရှင်းကမ်ဘာပျေါတှငျဥပဒေရေးရာပါသလဲ သင်တစ်ဦးရှယ်ယာရှင်နှင့်အရာရှိများနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးကိုင်ပြီးအခြားသူတစ်ဦးအဖြစ်လူတစ်ဦးရနိုင်မလား? ဒီဖြေဆိုရန်ကျနော်တို့လူကြိုက်အများဆုံးပြည်နယ်များ, Nevada ဝဲနဲ့ဖလော်ရီဒါအချို့ကိုကြည့်ယူပါလိမ့်မယ်။ ပညတ်တရားအရာရှိတစ်ဦးသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်လာနိုင်သူတွေအကြောင်းအဘယ်သို့ပြောသလဲ? ဆန်ခါတင်အရာရှိများသို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာများဆန့်ကျင်မည်သည့်ဥပဒေများကိုရှိပါသလား ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အဘို့အစိုင်အခဲသက်သေအထောက်အထားများကိုကျယ်ပြန့်သုတေသနကောက်ယူကြသည်။
ဆန်ခါတင်ဒါရိုက်တာများဥပဒေရေးရာလျှင်ပထမဦးစွာကျနော်တို့မြင်လိမ့်မည်။ ထို့နောက်ကျွန်တော်ကော်ပိုရေးရှင်းအရာရှိများမှာဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းထဲမှာကြည့်ရှုမည်။ အတူစတင်ရဲ့နီဗားဒါး Revised အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုကြည့်ယူကြကုန်အံ့။
NRS 78.130 အောက်ပါညွှန်ပြ:
တစ်ဦးကဒါရိုက်တာကအနည်းဆုံး 18 နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ဦးကသဘာဝလူတစ်ဦး (လူသား) ဖြစ်ရပါမည်။
မဟုတ်ရင်ဆွဲသွင်းပါဝင်၏ဆောင်းပါးများကိုအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမထားရင်, ဒါရိုက်တာများ stockholders မဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်.
အလားတူပင် ဝဲ Code ကို, ခေါင်းစဉ် 8, Ch ။ 1, Subchapter IV, 141 (ခ) ", ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါရိုက်တာကဤသို့ဆို၏§ stockholders မဖြစ်လိုအပ်ပါတယ် ဒါထဲဆွဲသွင်းပါဝင်၏လက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများကလိုအပ်သည့်မဟုတ်လျှင်။ "
Florida အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုခေါင်းစဉ် XXXVI § 607.0802 (1) ဒါရိုက်တာ 18 အသက်အရွယ်နှစ်သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေပေမယ့်သူကိုသဘာဝအပုဂ္ဂိုလ်များရှိရမည် "ကပြောပါတယ် ဒီပြည်နယ်နေထိုင်သူများသို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များဖြစ်စရာမလိုပေ အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်း၏ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းသို့မဟုတ်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ၏ဆောင်းပါးများဒါလိုအပ်မဟုတ်လျှင်။ "(အလေးပေးသောကဆက်ပြောသည်။ )
ကျနော်တို့ကမှာနေနေစဉ်, ဖွင့်ကြည့်ယူပါစေ နေးဗစ်။ နေးဗစ်ဖလော်ရီဒါကရစ်ဘီယံအရှေ့တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ ဒါဟာလူကြိုက်အများဆုံးကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းရေးတရားစီရင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါနေးဗစ်စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း Ordinance (NBCO), အပိုင်း VI ကို, 45 ဒါရိုက်တာများကသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်အခြားကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်စေခြင်းငှါဤသို့ဖော်ပြသည်။ သူတို့ကော်ပိုရေးရှင်း၏နာဗိစ်နေထိုင်သူများသို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကကုမ္ပဏီအခြားသို့မဟုတ်အစားထိုးဒါရိုက်တာများကိုခနျ့အပျနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီတော့အဘယျသို့ကဒီကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသနည်း? ပထမဦးစွာတိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းဒါရိုက်တာရှိရမည်။ ဒုတိယအချက်အနေတဲ့ဒါရိုက်တာတစ်ဦးကလူ့ဖြစ်လျက်ရှိ (သို့မဟုတ်နေးဗစ်အခြားကော်ပိုရေးရှင်းတွင်) ဖြစ်ရပါမည်။ ရှင်းနေသည်မှာဘယ်နေရာမှာတရားကိုဒါရိုက်တာကိုလည်း stockholder (ပိုင်ရှင်) ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုပြောဘူး။ ဆန့်ကျင်ရန်, ပညတ္တိကျမ်းအထူးသဒီတော့ကော်ပိုရေးရှင်းဆောင်းပါးများကိုမဟုတ်ရင်ဖော်ပြမဟုတ်လျှင်, "ဒါရိုက်တာများ stockholders မဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ " ဖော်ပြထားသည်ရုပ်ပွားတော်သည်နှင့်အညီ, နေသမျှကာလပတ်လုံးတစ်ဦးအဖြစ်လျာထားသောသည်ဤလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူသို့မဟုတ်သူမညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
အိုကေဒါတစ်ဦးအဖြစ်လျာထားသောဒါရိုက်တာအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအရာရှိများအဖြစ်အမှုဆောင်ကော? အရာရှိလေးစားမှုနှင့်အတူနောက်တဖန်, Nevada ဝဲ, ဖလော်ရီဒါနှင့်, ဟုတ်ပါတယ်, နေးဗစ်အလွန်ဆင်တူပြဌာန်းချက်ရှိသည်။
နီဗားဒါးခုနှစ်တွင်ဥပမာ, NRS 78.130, အကျဉ်းချုပ်ထဲတွင်အောက်ပါ says:
တိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းအရာရှိများ (ဥက္ကဌအတွင်းရေးမှူးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးမှူး, ဒါမှမဟုတ်ညီမျှ သိ. ) ရှိရမည်။
အရာရှိများမှာသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များ (လူသား) ဖြစ်ရပါမည်။
ဒါကြောင့်တိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းအရာရှိများရှိရမည်။ သူတို့ကလူဖြစ်ရရန်ရှိသည်။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကသူတို့ကိုရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြီးသားအမည်စာရင်းတင်သွင်းဒါရိုက်တာ၏အနေအထားကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်မြင်ကြပြီ။ သူတို့ကအထက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းလျှင်ရှယ်ယာရှင်များသဘောတူလျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်, ထိုအမည်စာရင်းတင်သွင်းအရာရှိများအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုခနျ့အပျနိုငျသညျ။
ဝဲအလွန်ရောနှောဖြစ်ပါတယ်။ ဝဲကုဒ်, ခေါင်းစဉ် 8, Ch ။ 1, Subchapter IV, 142 § (ခ) "အရာရှိထိုကဲ့သို့သောထုံးစံ၌ရွေးချယ်ရကြလိမ့်နှင့်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများကသတ်မှတ်ထားသည့်ဒါမှမဟုတ်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သို့မဟုတ်အခြားအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ကြသည်ကဲ့သို့သောအသုံးအနှုန်းများဘို့မိမိတို့ရုံးခန်းများကိုင်ထားကြလိမ့်မည်။ " ဟုဆို
အလားတူခုနှစ်, Florida အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုခေါင်းစဉ် XXXVI, § 607.08401 (1) က၎င်း၏ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများတွင်ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေနှင့်အညီဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကခန့်အပ်အဖြစ်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းအရာရှိများ install လုပ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ရှယ်ယာရှင်များဖြစ်လိုအပ်နေအရာရှိများနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမရှိပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ နေးဗစ် အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုအလားတူ verbiage ဆံ့။ (NBCO), အပိုင်း VI ကို, 51 (1) ရိုးရိုးအရာရှိများဘုတ်အဖွဲ့သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဆောင်းပါးများကိုဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများကညွှန်ကြားထားသည့်ထုံးစံ၌အသီးအသီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရကြလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ အားလုံးအရာရှိတွေတစ်ကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်ရသောအတွင်းရေးမှူး မှလွဲ. သဘာဝကပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြလိမ့်မည်။
အဘယ်အရာကိုအမည်စာရင်းတင်သွင်း LLC မန်နေဂျာများအကြောင်း?
အဘယ်အရာကို LLCs ကော? LLCs ဆန်ခါတင်မန်နေဂျာရနိုင်မလား? အရာရှိများနှင့်ဒါရိုက်တာများတို (လို့ရပါတယ်သော်လည်း) LLCs ယေဘုယျအားဖြင့်မကျင့်။ သူတို့ဟာပညတ္တိကျမ်းတစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုခေါ်ဆိုသောအရာကိုပြီ မန်နေဂျာများ။ အဆိုပါ Uniform လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေဟာ 50 အမေရိကန်ပြည်နယ်နှင့်အများအပြားနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်အများစုဖြတ်ပြီးမွေးစားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာမူကွဲရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအလွန်ဆင်တူလျှင်မတူညီကြသည်။ ဒီတော့ဒီမှာပြည်နယ်များ၏စုံတွဲတစ်တွဲမှာကြည့်ယူကြကုန်အံ့။
နီဗားဒါးခုနှစ်, NRS 86.071 အဖြစ် "Manager ကို" အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, ဒါမှမဟုတ်တော်တော်များများပုဂ္ဂိုလ်များ၏တဦးတည်းအတွက်သတ်မှတ်ထားသောသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲဖို့ LLC ၏အဖှဲ့အစညျးဒါမှမဟုတ် operating သဘောတူညီချက်များ၏ဆောင်းပါးများကိုအညီရွေးချယ်ထားကြသည်။ ငါတို့သည်လည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်မန်နေဂျာလိုအပ်ဘာမျှမကြည့်ပါ။
ဝဲ LLC Code ကို§ 18-101 (10) မန်နေဂျာတစ်ဦး LLC ၏မန်နေဂျာသည်၎င်း၏သဘောတူညီချက်သို့မဟုတ် LLC သည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သောအောက်တွင်ဆင်တူတူရိယာအညီအမျှအမည်ရှိသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာကဖော်ပြသည်။ ဝဲ§ 18-402 ကပြောပါတယ် မဟုတ်ရင်ထောက်ပံ့မဟုတ်လျှင် တစ်ဦး LLC သဘောတူညီချက်ထဲမှာတစ်ခု LLC ၏စီမံခန့်ခွဲမှုက၎င်း၏အင်္ဂါများ၌အပ်နှင်းခံရကြလိမ့်မည်။ ဒီတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, LLC သည်သဘောတူညီချက်မဟုတ်ရင်များကိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမဟုတ်သူတစ်ဦးမန်နေဂျာခန့်အပ်နိုင်ပါ။
ပညတ္တိကျမ်းဆန်ခါတင်အကြောင်း Says ကဘာလဲ
နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမ ဆန်ခါတင် အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းအထုံးအဖွဲ့တို့အတွက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုပေါ်လာ? ဟုတ်ပါတယ်, နီဗားဒါးနှင့်အခြားသောပြည်နယ်များအတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲ? NRS 78.418 (2) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်များ၏တစ်ဦးအဖြစ်လျာထားသောလျှင်တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းများ၏ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ဖို့စဉ်းစားမရကြောင်းပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအဖြစ်လျာထားသောအရာရှိသို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာကိုလည်းကုမ္ပဏီ၏ဆန်ခါတင်ထိန်းချုပ်မှုကိုမပေးပါဘူးသောပိုင်ရှင်များ၏တဦးတည်း, တစ်ဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်ပြုမူလျှင်။ ဒါကြောင့်, ထိုပညတ်တော်အတိုင်းယင်းရှယ်ယာရှင်မဆန်ခါတင်, ထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားကြောင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏စစ်မှန်တဲ့ပိုင်ရှင်များမှစိတ်ငြိမ်သက်ပေးသင့်ပါတယ်။
တောင်မှနိုင်ငံခြားအထုံးအဖွဲ့တို့ကိုအမည်စာရင်းတင်သွင်း၏အသုံးပြုမှုကိုအသိအမှတျပွု။ နေးဗစ်, NBCO ခုနှစ်, အပိုင်း VI ကို, 45 အခြားသို့မဟုတ်အစားထိုးဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရစေခြင်းငှါကပြောပါတယ်။
နီဗားဒါး LLC အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုလုပျထုံးလုပျနညျးတက်အကွေ့အကောက်များသောကာလအတွင်းလျာထား၏အသုံးပြုမှုကိုအသိအမှတျပွု။ Plus အား, LLCs များအတွက်ဆန်ခါတင်မန်နေဂျာ၏အသုံးပြုမှုကိုတားမြစ်ခြင်းမရှိပြဌာန်းချက်ရှိပါတယ်။
အမည်စာရင်းတင်သွင်းဥပဒေရေးရာသောအထုံးအဖွဲ့တို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအတော်လေးသိသာသည်။ ဒါကကျနော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးကော်ပိုရိတ်များနှင့် LLC ဥပဒေများအတွက်အမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုဥပဒေကြောင်းအရရှာရမလဲပေမယ့်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ equivalents မကြာခဏပညတ်တော်အားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြသည်သာ။ သာလေးတရားစီရင်မှု၏ဥပဒေများကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြသော်လည်း, ငါတို့ချယ်ရီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောသူတို့သညျအဘို့ကောက်ခဲ့ပါဘူး။ ငါတို့သည်ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းအဖြစ်လူကြိုက်အများဆုံးကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုအများအပြားအမေရိကန်ပြည်နယ်များရဲ့အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကျနော်တို့ဆန့်ကျင်ဖို့ဘာမျှကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့တယ်။
ဆန်ခါတင်ဝန်ဆောင်မှုကြီးမားတဲ့ရဲ့ privacy နဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဆန်ခါတင်ကိုလည်းကော်ပိုရေးရှင်းဒိုင်းလွှားကိုခိုင်ခံ့စေအတွက်ကူညီစေခြင်းငှါကော်ပိုရိတ်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်နှင့်အတူကူညီနိုင်သည်။ အဲဒီ privacy ကိုဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်, ကဆိုသည်။ ပညတ္တိကျမ်း Breaking မဟုတ်ပါဘူး။ NRS 78.030 သဘောတူ။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမည်သည့်တရားမဝင်ရည်ရွယ်ချက်ဒါမှမဟုတ်လိမ်လည်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူတစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းတည်ထောင်ရန်ရမည်မဟုတ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဥပဒေချိုးဖောက်သူများအဖြစ်မှလျှောက်ထားစရာမလိုပေ။ တစ်စုံတစ်ဦးကသူသို့မဟုတ်သူမဥပဒေရေးရာရည်ရွယ်ချက်ထက်အခြားအဘို့ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းညွှန်ပြနေလျှင်, သဘာဝကျကျကျနော်တို့ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ငြင်းဆန်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်လျှင်မှာတော့လမ်းဆင်း, ငါတို့တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးတရားမဝင်ထုံးစံ၌ကုမ္ပဏီ၏အသုံးပြုနေသည်သို့မဟုတ်ရာဇဝတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနုတ်ထွက်နှင့်ဖြတ်မည်ဖြစ်ပါသည်ခံစားရတယ်။
သင်သည်သင်၏ privacy ကိုမြှင့်တင်ရန်လိုသလား? သင်သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေးရန်နှင့်တစ်ဦးတရားစွဲဆိုမှုပစ်မှတ်ဖြစ်လာ၏သင့်လေးသာမှုလျော့ချဖို့ခြေလှမ်းတွေယူချင်ပါသလား သငျသညျခိုငျမာဟာကော်ပိုရိတ်ကုလားကာကိုစောင့်ရှောက်မှာတွေ့ကြုံသောသူတို့ကိုမှသင်၏စီးပွားရေးနှင့်သိမ်းသွင်း ထား. အကူအညီများကို run ဖို့လိုသလား? သင်သာဥပဒေရေးရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင့်ကုမ္ပဏီသုံးစွဲဖို့စီစဉ်ထားပါသလား ထိုအခါဆန်ခါတင်ဝန်ဆောင်မှုသင်တို့အဘို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ပဌနာကိုဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်တစ်ဦးတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ရှိပါသည်။ ဒီစာမျက်နှာတခုတခုအပေါ်မှာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပုံစံကဒီအဖိုးတန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကရရှိရန်အလို့ငှာလည်းရှိပါသည်။